Jwxo-shiil: Maxaynu ka Yeelaa, Hadalka Zenawi “reer Cabdile ayaa ka badan reer Isaaq”? – Rasaasa News
Aug 16, 2010 Hadalka Zenawi "reer Cabdile ayaa ka badan reer Isaaq"?, Jwxo-shiil, Jwxo-shiil: Maxaynu Yeelaa, Ogaden, ONLF
Waxaa maalinimadii shalay ahayd guriga Jwxo-shiil, isugu tagay labadii tukiyo taliyahooda Jwxo-shiil iyo ninkii Roda Afareey, oo in yar isla joogay iyaga oo amakaaksan oo itaal daran.
Shalay gabaldhici goor ay saddexdii ahayd ayey hool ma jiree ku soo luudeen hoyga afada Jwxo-shiil. Waxay isweydiiyeen war waaka Meles hadlay ee waliba kala sheegay reerka aynu ku maxaabsano magaciisa ONLF, gudihiina waxba inooma jiro ee maxaynu yeelaa.
Ninka Rooda Afjano oo isagu uun ah, nin tafta loo xayday laakiin ayna ku jirin garasho kale ayaa yidhi maynu kulan isugu yeedhno golaha dhexe ee kooxdeena. Magacaabe intuu wax la socdo yaraa xagee la isugu iman daad baa qaaday dadka uu ka hadlayo.
Jwxo-shiil, ayaa hadlay oo yidhi, wax isu imaad la yidhaahdo ha sheegin Eritrea ayaa ina waday iyana way ina fahamtay oo nafar inagama joogo hada, Ideecadii Somaliweyn oo ay haystaan mucaarad Somaliyeed ayuunbaa jirta. Adeer meel kale iska daayoo Ameerika ayaanan tagi karin aniga oo Baasaboor Ingriis ah haysta, Afrkana waaba la igu khaarijin oo Dr.Dolal ayaan wali hadalkiisa la daynin. Meel aan aduunka ka tagi karo waa uun Scandanivian-ka iyo hoygayga.
Maadeey, oo isagu aad u bararsan tiigsanayana cunida dhawr minjood oo uu rabo in uu caawa fiidkii cuno maadama ay weekend tahay ayaa yidhi Maxaan suubin karaa aan bayaan soo saaro, kaas ayaa ku filan hadalka Meles Zenawi.
Macalin Diirane, oo iskaba daalan, bidabana xaga garashada iyo fikirka Maadeey, ayaa yidhi wakhti xuna baan joognaa talooyin badana waa loo baahan yahay, waxaan ku raacsanahay fikirka Maadeey ee ah in Statement af Somali iyo Af Ingriis ah in la sameeyo intaasi way ku filan tahay hadalka Meles Zenawi.
Cabaar kolkii la aamusnaa, ayuu Jwxo-shiil yidhi, wixii aynu hore ugu heshiinay kolkii ay aaafooyinkani inagu bilowdeen wuxuu ahaa aynu saxaafada xoojino, si aynu u soo jiidano dadkeena inta aan inaga warhaynin iyo aduunka intiisa kaleba una khalkhal galino Males iyo Maamulka Kilalkaba.
Ninka Roada Afreey, habeenkii la iga waraystay TV-ga Yurub laga daawado ee SomaliUK, waxaan u sheegay in aan saxaafad xoog badan haysano oo ku hadasha afka Kooxda, waxaanse kala garan waayey kee inoo ahaa labada bog ee ay kala qoraan labada wiil ee reer Isaaq ee Ogadennet.com iyo Ogaden.com, horta kee ku hadla afka Kooxda?
Jwxo-shiil, waxaan filayaa in la isku raacay in warsaxaafadeed aynu soo saaro soo sidaas ma ah, gacanta ma u taagnaa [waa afar kaliya]. Waa la isku raacay ayey saddexda kale yidhaahdeen.
Sidaas ayuu ninka Rooda Afareey u soo diyaariyey wax ay ugu yeedheen warsaxaafadeed, ah Zenawi baa yidhi [reer Cabdile ayaa ka badan reer Isaaq].
Cali Shoocaac oo Lagu Xidhay Jigjiga